Sare u kaca iyo hoos u dhaca Siyaasiga Sanbaloolshe [Warbixin] – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTASare u kaca iyo hoos u dhaca Siyaasiga Sanbaloolshe [Warbixin]
Sare u kaca iyo hoos u dhaca Siyaasiga Sanbaloolshe [Warbixin]
Golaha wasiirada faahfaahin kama aysan bixinin sababta Cabdullaahi Sanbaloolshe xilka looga qaaday, balse waxa ay timid xilli ay suuqa ku jireen warar ku saabsan in “biyaha hoostooda la iska arkay”.
Dad badan waxa ay filayeen, ama soo jeediyeen in xilka laga qaado markii ay caddaatay in Itoobiya loo dhiibay “muwaadin Soomaaliyeed” Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, balse taas ma aysan dhicin sabab kasta ha lahaatee.
Xil ka qaadistiisa ayaa timid waxyar ka dib qarixii lagu hoobtay ee Soobe ee 14-kii Oktoobar. Sanbaloolshe ayaa qorey maqaal dheer oo uu ku dhaliilayo hay’adaha sirdoonka reer galbeedka ee NISA la shaqeeya, waxaana maqaalkaas lagu daabacay wargeyska New York Times.
Marka laga hadlayo halbeegga siyaasadda Soomaaliya, Sanbaloolshe hadda banaanka ayuu ka joogaa xeyndaabka siyaasadda, wuxuuna noqonayaa qofkii koowaad ee u muuqda in uu ku qamaaray dowladda hadda jirta, isaga oo si isdaba joog ah u waayay labo xil oo midna loo doortay, midna loo magacaabay – waa kursigii xildhibaan iyo middkii safiirnimo ee uu iska casilay.
Dad badan waxa ay aad ugu amaaneen gacanta birta ah ee uu ku qabtay amniga caasimadda labadii mar ee loo magacaabay mada NISA, balse si taasi la’eg ayaa loo naqdiyay.
41,081 total views, 1,834 views today
41,081 total views, 1,834 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
41,154 total views, 1,834 views today
41,154 total views, 1,834 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
41,166 total views, 1,834 views today
41,166 total views, 1,834 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
41,191 total views, 1,835 views today
41,191 total views, 1,835 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
41,219 total views, 1,832 views today
41,219 total views, 1,832 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]